Mudaharaad looga soo Horjeedo Ciidamada Jabuuti Oo ka Dhacay magaalada Jalalaqsi.(Sawiro) – Xeernews24
Mudaharaad looga soo Horjeedo Ciidamada Jabuuti Oo ka Dhacay magaalada Jalalaqsi.(Sawiro)
Mudaharaad looga soo horjeedo iska-hor imaad saaka dhexmaray ciidamada Jabuuti ee Amisom iyo kuwa maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi ayaana isugu so baxay banaan bax ay uga soo horjeedaan amarka ciidamada AMISOM iyo iska hor imaadka halkaasi ka dhacay, waxa ayna dadka gubayeen taayaro iyagoona xiray wadooyinka qaar.
Iska hor imaadkan ayaa ka dhashay kadib markii Ciidamada AMISOM ay amreen in howlgal miino baadhis ah ka sameeyaan degmada Jalalaqsi sidaas darteydna amreen in la damiyo shirkadaha isgaadhsiinta, waxaana amarkaasi diiday booliiska ka howlgala degmada Jalalaqsi iyo maamulka.
Iska hor imaad ayaana degmada Jalalqsi ku dhax maray ciidamada booliiska iyo kuwa AMISOM, waxaana la sheegay in booliiska banaanka uga baxeen magaalada ayna la wareegeen ciidamada AMISOM taliska booliiska iyo xarumaha maamulka.
Xaalad kacsanaan ah ayaana wali laga dareemayaa degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in xiisada ka dhalatay iska hor imaadka la xaliyo lana soo celiyo deganaanshaha degmadaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/jala-2.jpg 539 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-06 16:38:312019-10-06 16:38:31Mudaharaad looga soo Horjeedo Ciidamada Jabuuti Oo ka Dhacay magaalada Jalalaqsi.(Sawiro)
DAAWO;Golaha joogtada ah ee Beelaha Direed Oo Ka Hadlay Dagaal Canfarta Iyo... Qurba-Joogta Cariga Ingriiska ee reer Sitti ayaa maanta ka jawaabay baaqi ka...